မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ-အမေရိကန် နိုင်ငံခြ - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးအပ်ရေး စသည့်အ ကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon.Rex TilleronHon.Rex Tilleron တို့သည် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီး၌ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ရန်၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ကန်အစိုးရဘက်မှ ဖိအား ပေးလုပ်ဆောင်သွားမှုများကို အကြံမပြုခဲ့ ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကူအညီ ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သတင်း ထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားရာတွင် မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာထွက် ပြေးသူများ နေရပ်ပြန်ရောက်ရန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲကာ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထုိ့အတူ ရခိုင်ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် UEHRD ကို ဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက် ပြီး မိမိက ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေသည်ဟု ပြော လာကြသည်မှာ မိမိစဉ်းစား၍မရကြောင်း၊ အမှန်တကယ်မူ မိမိနှုတ်ငုံပိတ်နေခြင်းမရှိ ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဟု မိမိကိုယ်မိမိ သက်သေပြနိုင်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဟု ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့သည်။